IPartner ပြိုင်ပွဲမှာ အထူးချွှန်ဆုံးအနိုင်ရခဲ့သူကို FBSကြိုဆို
အနိုင်ရရှိသူ အကောင်းဆုံးပါတနာကတော့ စိန့်ပီတာစဘဂ်ကို ရောက်လာမယ့်အချိန်ကို FBSတစ်ဖွဲ့လုံးက စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ သူရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ! ဒီအချိန်ကတော့ ရမှတ်ပေါင်း ၃၀၂၅မှတ်နဲ့ ပြိုင်ပွဲသုံးခုပေါင်း အမှတ်အများဆုံးရရှိပြီး ပြိုင်ပွဲမှာ အအောင်မြင်ဆုံးသောမှတ်တမ်းရေးထိုးနိုင်ခဲ့သူ- တရုတ်ပြည်မှ Mr. Zhang Chenကို ကြိုဆိုဧည့်ခံခဲ့ရတဲ့ အချိန်ပါ.
FBSအဖွဲ့သားများမှ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီရုံးခန်းတွင် Mr. Zhang Chenကို ၀မ်းသာအားရ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲတွေ့ဆုံကြိုဆိုခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ အထူးဧည့သည်တော်ကြီးကို သာယာလှပတဲ့စိန့်ပီတာစဘက်မြို့အနှံ့ လိုက်လံပြသပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်. Mr. Zhang Chenကလဲ လွန်တရာမှသဘောကျနှစ်ခြိုက်ပြီး တနေ့နေ့မှာ သူ့မိသားစုတွေနဲ့ပါ လာလည်ဖို့ အလွန်ပဲ စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့အထိပါပဲ.
Mr. Zhang Chenတစ်ယောက်က ဒီလောကနဲ့မစိမ်းဘဲ - Forexလုပ်နေတာ ၇နှစ်လောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်. စလုပ်ကာစတုန်းက သူဟာ ဘဏ်မှာမန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဖောက်သည်တွေအတွက် ၀န်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်မယ့် အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီကောင်းကို ရှာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. ၂နှစ်လောက်အကြာမှာ FBSကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ သူရှာနေတာတွေ့ပြီခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်. အခုအချိန်မှာဆိုရင် သူဟာ အောင်မြင်တဲ့ FBSပါတနာတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ဖောက်သည်အယောက် ၃၀လောက်ကလဲ iPhoneဆုတွေရရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်.
FBSမှာ လူတိုင်းအမြတ်ရစေမယ့် အရာအားလုံးရှိနေပြီး: စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေ၊ ထူခြားကောင်းမွန်တဲ့ ပါတနာကော်မရှင်တွေ WeChat, Alipay နဲ့ Chinaunionpayတို့လို အဆင်ပြေတဲ့ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပေးရတဲ့ ပွဲခကြေးအဟ spreadက သုညနဲ့ leverageဆက ၁: ၃၀၀၀အထိရနိုင်တဲ့အကြောင်း Mr. Zhang Chenက ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်.
ဒါကြောင့်ပဲ နိဂုံးချုပ်ရမယ်ဆိုရင် FBSမှာရောင်းဝယ်တာတွေနဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တာတွေက မိတဆွေတို့ကို ၀င်ငွေတိုးတက်စေရုံသာမက ယခုလို အားကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ပြီး တသက်မမေ့နိုင်ဖွယ် ယခုကဲ့သို့ အတွေ့အကြုံတွေကို ခံစားရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပြိုင်ပွဲနှင့် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များမှာပါဝင်ဆင်နွှဲပြီး မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အနာဂတ်ဘ၀တွေသာယာလှပဖို့ FBSမိသားစုကြီးမှာ အတူတကွပါဝင်လိုက်ပါ! ကဲ - ဂုဏ်ယူပါတယ် Mr. Zhang Chen! ယခုခရီးစဉ်မှာ အံ့အားသင့်ဖွယ်ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဆက်လက်ခံစားလိုက်ပါ.